वीरगञ्जको कोभिड संक्रमितले प्रयोग गर्ने चर्पी र बाथरुम - Birgunj Sanjalवीरगञ्जको कोभिड संक्रमितले प्रयोग गर्ने चर्पी र बाथरुम - Birgunj Sanjalवीरगञ्जको कोभिड संक्रमितले प्रयोग गर्ने चर्पी र बाथरुम - Birgunj Sanjal
वीरगञ्जको कोभिड संक्रमितले प्रयोग गर्ने चर्पी र बाथरुम
पाठक संख्या ५३३
वीरगञ्ज । नारायणी अस्पतालको गाइनो (महिला तथा प्रसूति) वार्डमा बनाइएको आइसोलेसनमा कोरोना संक्रमितलाई राखेको १० दिन बितेको छ। यस वार्डका तीन वटा कोठामा २३ जना संक्रमितलाई राखिएको छ ।उनीहरूका लागि दुईवटा मात्रै शौचालयको प्रवन्ध छ । त्यसमध्ये एउटाको प्यान सफा छ, अर्कोको प्यान र भित्ता दुवै कालो छ ।तीन दिनअघि बी ब्लकका वार्ड प्रमुखले बन्द अवस्थामा रहेको एउटा ढोका खोले । यहाँ तीनवटा शौचालय छ । बाथरुममा ४ वटा धारा छन् । २३ संक्रमितले पालैपालो त्यसैमा नुहाउनुपर्ने बाध्यता छ। अरू दुईवटा बाथरुम सामान्य मर्मतपछि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन् ।
सफाइ कर्मचारीको बदमासीका कारण अहिलेसम्म शौचालय र स्नानघर सफा हुन सकेको छैन । स्टाफ नर्स अहेमा थापाले १० दिनमा चार पटक सफाइ कर्मचारीलाई पीपीई सेट लगाएर सफा गर्न पठाइसकेकी छिन् । फर्केर उनीहरूले नर्स थापालाई सफा गरिसकेको बताउने गरेका छन् ।‘शौचालय प्रयोग गरेपछि सफा राखौं’ भनेर लेखिएको छ । सफा भए पो सफा राख्नु ?’ एक संक्रमितले गुनासो गरे ।
तर, सफाइकर्मी भित्र पसेर त्यसै फर्किने गरेको गाइनो बी वार्ड प्रमुख बताउँछन् । ‘भन्दाभन्दा थाकिसक्यौं, सरसफाइकर्मी आउँछन्, सफा नै नगरी जान्छन्’ उनले भने ‘एकपटक सफा गरिदिनूस् अनि हामी त्यसलाई मेन्टेन गरेर राख्छौं भनेका छौं ।’सी वार्डका प्रमुख पनि शौचालयमा गरिएको सफाइप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ‘उनीहरू आउँछन्, जान्छन्, राम्रोसँग सफा नै गर्दैनन्’ उनको भनाइ छ ।स्टाफ नर्स श्रुति साहका अनुसार अस्पतालमा महिला स्विपरलाई भुइँ सरसफाइ गर्ने र कार्यालय सहयोगीलाई माथिको भित्ता, फ्यान सफा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। हाल स्थायी र ज्यालादारीमा गरेर दुई किसिमका सरसफाइकर्मी कार्यरत छन् ।
अस्पताल विकास समितिका स्थायी २४ जनाको दरबन्दीमा १० सिट खाली छ । ज्यालादारीमा २० जना र चार जना करारमा कार्यरत, एक जना नाइके छन् । जसमध्ये १७ जना महिला छन् ।महिलालाई संक्रमितको उपचार हुने ठाउँको सफाइमा खटाइएको छैन । १७ जना सफाइकर्मीहरू एउटै परिवारको भएकोले घरमा कुनै चाडपर्व पर्दा वा जुठो पर्दा कोही पनि नआउने समस्या छ ।स्टाफ नर्स थापा सफा गर्न पठाएको तर सफा नभएको गुनासो आएको बताउँछिन् । ‘गाइनो वार्डको आइसोलेसनबाट शौचालय र स्नानघर सफा नभएको भनी गुनासो आएपछि दिनहुँ सफा गर्नूस् भनेर पठाएको छु’ थापाले भनिन् ‘तर सफा नै गर्दैनन्, के गर्नु ? भन्दा-भन्दा थाकिसकेँ ।’
उनीहरूलाई उचाल्ने काममा कर्मचारी संगठनका मुखियाहरूको मुख्य भूमिका रहने गरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । यस्तै विषयमा एक दिनअघि मात्रै नारायणी अस्पतालका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सन्तोष सिंह र पूर्वअध्यक्ष हरि गुप्ताबीच हात हालाहाल नै भएको थियो ।पछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदन उपाध्यायले दुवैलाई सम्झाएका थिए । उनीहरूले भने सामान्य विवाद मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।सुरेश बिडारीको सहयोगमा अन्लाईनखबर को लागी |